Ixesha kunye nabahlobo 16
Ngaba ukholelwa kwiinkwenkwezi njengenzululwazi? Ukuba kunjalo, lide kangakanani ukuba liqwalaselwe ngokubhekiselele kwimpilo yabantu kunye neminqweno?
Ukuba ukuvumisa ngeenkwenkwezi, ke ukuvumisa ngeenkwenkwezi kusayensi. Njengoko igama libonisa, ukuvumisa ngeenkwenkwezi kusayensi yeenkwenkwezi. Sikholelwa ukuba ukuvumisa ngeenkwenkwezi yenye yezona zinto zibalulekileyo kwezenzululwazi, kodwa sikwavuma ukuba uninzi lwabantu abathetha ngeenkwenkwezi, ababeka ngeenkwenkwezi okanye baxela kwangaphambili ngeziganeko ezizayo, bazi okungaphezulu kakhulu koshicilelo lwezinye iinkalo zomzimba . Sikholelwa kakhulu ekuvumiseni ngeenkwenkwezi kwaye kuncinci kakhulu kubavumisi ngeenkwenkwezi. Ovumisa ngeenkwenkwezi ngumntu owaziyo imithetho elawula imizimba esemoyeni, ekusebenzeni kwangaphakathi nangaphandle, iimpembelelo ezivela kwaye zisebenze kule mizimba ngokunxulumana nayo, kunye nemithetho elawula neyokulawula ezi mpembelelo kubomi babo ngokunxulumene omnye komnye kunye nesenzo sabo emntwini.
Ovumisa ngeenkwenkwezi ngumntu okwaziyo konke oku, kodwa umntu osevumisa ngeenkwenkwezi akathethi into ayaziyo. Uyazi ukuba akanakuhlala evumisa ngeenkanyezi kwaye abalise izinto ezenzeka kwixesha elidlulileyo okanye isifanekiselo kwaye axele kwangaphambili ngeziganeko ezizayo, kwaye, kwinkonzo, wafumana imali. Isazi ngeenkwenkwezi, ngokwenyani yokwenyani, simele ukuba sizikhuphile izinto zehlabathi kwaye sakhula ngaphezulu komhlaba ukuze sazi iinkwenkwezi nayo yonke into ethethwa "ziinkwenkwezi." Kuba sikholelwa ukuba iinkwenkwezi azizizo waziwa kakhulu, nkqu nangabalandeli benyani ngqo njengenzululwazi yeenkwenkwezi. Ukuvumisa ngeenkwenkwezi kujongana nezizathu, ubukhulu, umgama kunye nomgaqo-siseko ophathekayo wemizimba yasezulwini. Ukuvumisa ngeenkwenkwezi bubugqi okanye inzululwazi eyimfihlo yokuvumisa ngeenkwenkwezi. Sikholelwa ukuba ezo ngcaciso zincinci zobukrelekrele kwinto esiyibiza ngokuba isibhakabhaka zithetha okungaphezulu kakhulu kuthi kunoko kunokuthiwa ngulowo uvumisa ngeenkwenkwezi okanye ngeenkwenkwezi, ebhala phantsi kweso sihloko.
Iinkwenkwezi zinxulumene nobomi bomntu kunye nezinto anomdla kuzo kangangoko sinokuthi sizixabise kwaye siziqonde. Bayakuhlala babambe umdla wengqondo yomntu.
Kutheni umzuzu wokuzalwa kwihlabathi lomzimba uthonya i-destin of the ego for that incarnation?
"Umzuzu" wokuzalwa ubalulekile kwikamva le-ego kuba ngelo xesha likwimeko ebaluleke kakhulu, kwaye zonke iimpembelelo ezifunyenweyo ziya kuba neziphumo ezihlala zihleli. Into eyenziweyo ayinakulungiswa. Iimpembelelo ezikhoyo ngelixa lokuzalwa kufuneka zibe nefuthe elingaqhelekanga kubomi bexesha elizayo kuba ngenxa yokulungiselela kwangaphambili oko kuya kuchaphazela umzimba obuthathaka we-astral. Ngaphambi kokungena kwihlabathi, umzimba uxhomekeke ekuxhasweni kobomi bomzimba bomzali. Ihlala emhlabeni ngummeli kuphela. Ihlala kwihlabathi elingaphakathi kwehlabathi lomzimba. Ayikawuphefumleli owayo umphefumlo, esisiqalo sobomi bayo obuzimeleyo bokuzimela. Ngexesha lokuzalwa komzimba wahlulwe kumzali kwaye ungasaphefumli ngummeli, kodwa ukhupha umphefumlo wakhe kwi-ego yomzali wakhe. Umzimba awusabunjwanga okanye ukhuselekile kwihlabathi langaphandle kunye nefuthe ngumzimba kanina; ihlala emhlabeni emzimbeni wayo, ngaphandle kolunye ukhuseleko lomzimba okanye isigqubuthelo. Zonke iimpembelelo ezikhoyo ngelo xesha zizenza ngathi azinakuzenzela umzimba omtsha we-astral, othi ke ube yifilimu ecocekileyo okanye ipleyiti, ulungele ukufumana konke ukubonwa kunye nefuthe, eliqhutywa kubomi, kanye njengokuba umzimba wenyama unoku Phatha inxeba okanye uphawu olwenzelwe ebomini bokuqala. Ngesi sizathu umzuzu wokuzalwa ubalulekile kwaye uya kuba nefuthe emva kobomi emhlabeni.
Umzuzu wokuzalwa usenza njani isigqibo somntu emhlabeni?
Ukuze umzuzu wokuzalwa ungene emhlabeni unokumisela ikamva lomntu esiyikholelwayo, kodwa ukuba uhlala usenza isigqibo esingasikukholwayo. Ikamva limiselwe ekuzalweni kuphela xa umntu ezimisele ngokuphila ngokuchanekileyo ngokungqinelana neempembelelo ezifunyenwe ngexesha lokuzalwa. Ngexesha lokuzalwa komzimba we-astral wosana ufana neplate yenzalo enomdla. Kwangoko kubonakaliswa kwihlabathi elibonakalayo iimpembelelo ezikhoyo zichaphazeleka kuwo. Ukuphefumla kokuqala komntwana urekhoda iimpembelelo kunye nezinto ezibonakala emzimbeni obukekekileyo, kwaye ezi zinto zikhanyiswayo zixhonywa emzimbeni we-astral wosana olusanda kuzalwa ngendlela efanayo nokuvela kufunyanwa kwaye kugcinwe kwifoto yokufota. Ukuphila ngokwentelekelelo yomntu ke kukulandela iingcebiso ezibonisiweyo kwaye uphile ngokuhambelana nezimvo ezifunyenwe ngexesha lokuzalwa. Ezi mpawu ziphuhliswa ngokuphuhliswa komzimba kunye nokusetyenziswa kwengqondo. Ezi mpawu zimi ngasemva kwaye ziphosa imifanekiso yazo engqondweni nasengqondweni inesiphelo sayo esinikwe yona yile mifanekiso. It, ingqondo, inokuthi isebenze ngokwempembelelo kunye neziphakamiso ezivela kwimibonakalo okanye inokubonisa indlela eyahluke ngokupheleleyo kuneempawu ezifunyenweyo. Konke oku kuxhomekeke kwingqondo okanye kwimpilo, nokuba ngaba yomelele ngokwaneleyo kwaye iya kuthanda ukwenza umsebenzi kwihlabathi ngaphandle kwalowo ucetyiswayo ziimpembelelo zemveli.
Iimpembelelo ekuzalweni, okanye kwimpumelelo yomntu, zisebenza njani ne-karma ye-ego?
Isiphumo sikaKarma sisiphumo soko umntu akwenzileyo nakwenzileyo; into umntu ayicingeleyo nawayenzayo ikamva lakhe, kodwa isenzo kunye nokumiselwa kusebenza kuphela kwixesha elithile. Ixesha elichazwe apha ebomini. Isiphelo, ke, kwixesha, yikarma yeli xesha; Eli xesha bubomi bomzimba obuzelwe ehlabathini. Iingcamango kunye nezenzo zomntu ebomini obunye zibangela kwaye zizise iimeko zobomi obulandelayo obulandelayo; Iimpembelelo ezikhoyo xa kuzalwa ziimpawu zento umntu awayeyenzile ngaphambili kunye nento anokuyilindela ngoku. Umzuzu wokuzalwa, ke, kufuneka uhambisane kwaye usebenzisane nekarma yobomi, kuba iyikarma, okanye isiphumo sezenzo.
Ngaba iimpembelelo zeplanethi ziqeshelwe ukulawula ikarma yabantu, okanye ikamva. Ukuba kunjalo, ingena phi inkululeko?
Ewe, iimpembelelo zeplanethi kunye nazo zonke ezinye iimpembelelo zisetyenziselwe ukwenza kunye nokumisela ikamva. Kodwa ikamva lomntu ulilungiselele ngokwakhe. Siyintoni na isiphelo sakhe? Nangona kunjalo ulungiselele kwaye kufuneka ayamkele. Kunokutshiwo ukuba indoda ayinakubonelela ngento engayithandiyo kwaye, ngenxa yoko, ayiyi kubonelela isiphelo esingayinqwenelanga. Ukuchaswa okunjalo kubonwa kufutshane. Into leyo umntu ayikhethayo kwaye amlungiselele yona okanye abanye kufuneka ixhomekeke kumandla akhe okukhetha kunye neendlela zakhe zokubonelela. Umfana osweleyo onolwazi oluninzi, okanye indoda endala enezinto ezincinci, umntu ngamnye wayenokukhetha kwaye anikezele ngokwahlukileyo, ngokolwazi kunye neendlela zakhe. Into umntu ayikhethayo aze ayimise njengenkwenkwe ayinakuze ixatyiswe kwaphela kwiminyaka ezayo, kuba inkwenkwe sele ikhulile ngeminyaka kulwazi nakukuxabisa kwakhe izinto, kwaye into yokudlala yabantwana okanye itrinket ifumana uqwalaselo oluncinci njengesiphumo. Umntu osebenzise isigqibo esincinci ukwenza ikhontrakthi, nangona kunjalo ubophelelekile kwisivumelwano sakhe, nangona kunjalo uninzi lokuzisola kwakhe kunokuba kukufunda ubume bekhontrakthi. Unokuqhankqalaza, kodwa uqhankqalazo aluyi kumkhulula kwisibophelelo. .
Nokuba kungoku okanye ebomini obudlulileyo umntu unemvumelwano yoko akubiza ngokuba sisiphelo. Le yeyona karma yakhe, okanye ikhontrakthi ayenzileyo. Kuyinto. Inkululeko yokuzikhethela yomntu ayixhomekekanga kwinto aya kuyenza ngokuzithandela, okanye afuna ukuyifumana, kodwa isigqibo asenzayo. Indoda enyanisekileyo ayisebenzisi amandla ayo ekucwangciseni indlela yokwaphula isivumelwano okanye ukuzikhulula kwiimbophelelo zayo. Indoda enyanisekileyo iyazixakekisa ngokuzalisa ikhontrakthi yayo kwaye ifezekise uxanduva lwayo. Kwangelo xesha, ukuba ikhontrakthi okanye uxanduva lubonwa naye njengongafunekiyo ngekhe enze enye ikhontrakthi enjalo, engazukuzibophelela kuye ukuba afane noxanduva. Imvumelwano kunye noxanduva olunjalo yintombazana okanye ikarma, eyenzelwe yona.
Inkululeko yakhe yenkululeko ingena xa ethatha isigqibo malunga nendlela aya kujongana ngayo nentanga yakhe okanye ikarma. Ngaba uya kuzama ukuyiphepha, okanye iya kujongana nokusebenza kuyo? Nantsi inkululeko yakhe yokuzikhethela. Njengoko esenza ngokuzikhethela, uya kwazisa ikamva lakhe, aze abotshelelwa kuye njengoko exhobile okwangoku.